fonosana fonosana fonosana lamba fonosana China Manufacturer
Dongguan Yalan Packing Materials Co., Ltd. [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Mark: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide mpanondrana:21% - 30% Certs:ISO9001 Description:Fametahana Plastika Film matevina,Pallets palapetra plastika,Fanaovana sarimihetsika fonosana
Home > Products > Sarimihetsika mihetsika > Sarimihetsika mihetsika miloko > fonosana fonosana fonosana lamba fonosana
Sarimihetsika fonosana fonosana vita amin'ny plastika
Ny sarimihetsika fonosana fonosana vita amin'ny plastika dia misy antoka azo antoka, ny akora mamatsy avy amin'ny Exxon Mobil Metallica dia nanampy, miaraka amin'ny 400% ELONGATION sy ny famokarana maoderina sy ny haitao ara- tsarimihetsika ary koa ny fampiasana ireo fitaovana avy amin'ny mpanamboatra ekena mandray anjara. ho an'ny kalitao avo kokoa momba ny horonantsary novokarin'i YALAN PACK. afaka manohana ny serivisy OEM ODM isika araka ny takian'ny mpanjifa amin'ity fangatahana ity miaraka amin'ny traikefa fanondranana mihoatra ny 16 taona. Ny Pallet Stretch Film dia afaka namboarina mba hahafahanao manamarina ny kalitao sy ny asany. Azo antoka fa mazava tsara ny mamela anao hitandrina tsy an-kijanona izay ao anaty fonosana tsirairay, manampy anao hamonjy fotoana ary hivadika ho asa mora. Ny sarimihetsika fanontana dia ampiasaina amin'ny famolavolana automatique sy semi-automatique amin'ny fifangaroana na inona na inona.
Ampitahao amin'ny mpamatsy hafa:
Fametahana Plastika Film matevina Pallets palapetra plastika Fanaovana sarimihetsika fonosana Fametahana latabatra matevina Fametahana plastika maintso Fametahana plastika mora vidy Fametahana matevina Fametahana akora henjana matevina